Free Thinker: ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်အူတစ်ရစ် ထပ်အကြပ်ခံရခြင်း
New Enhanced CSOC from 1 May 2013
စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ ပူညံပူညံလုပ်မှု၊ အလုပ်သမားပါတီ၏ နိုင်ငံခြားသားဟူသမျှ တစ်ယောက်မှ မသွင်းရေး မူဝါဒ စသည်တို့ကြောင့် စင်ကာပူအစိုးရသည် စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသားများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် တင်းကြပ်လျှက်ရှိရာ ယခု တစ်ရစ်ထပ်ကြပ်လိုက်သော ၀က်အူမှာ ၀ပ်ပါမစ် (Work Permit) သမားများအတွက် အကြပ်ရိုက်စရာများ ဖြစ်သွားလေမလား စဉ်းစားစရာ တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
များမကြာမီ ကာလများက ၀ပ်ပါမစ်များအတွက် လဲဗီးကြေးများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ S Pass နှင့် EP များအတွက် လစာများ တိုးမြှင့်ခြင်းများအပြင် S Pass များ ခန့်ထားရေး Quota ကိုပါလျှော့ချခဲ့၏။ ထို့ပြင် S Pass များသည် လခ ၄၅၀၀ မပြနိုင်လျှင် မိမိမိသားစုကို မခေါ်နိုင်တော့။
ယခင်က စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ရန်ဝင်လာသမျှသော ၀ပ်ပါမစ်များအားလုံး အလုပ်စတင်မလုပ်မီ SOC (Safety Orientation Course) အောင်ရသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစကာ ထိုသင်တန်းကို စာမေးပွဲသုံးခါကျလျှင် စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် (Work Permit) ထုတ်မပေးတော့။ သို့သော် ထိုစဉ်က ထိုသင်တန်းမှာ တစ်ရက်သင်တန်းသာ ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲ မေးခွန်းမှာလည်း မှားမှန်ရောထွေး၊ အမှန်ရွေး (MCQ – Multiple Choice Question) သာဖြစ်သဖြင့် သိပ် အခက်အခဲမရှိလှ။ ဒါတောင် သုံးခါစလုံးမအောင်လို့ ပြန်သွားရသူတွေ ရှိသေး၏။
စင်ကာပူအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများ၌ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လူအသေအပျောက် အများဆုံးလုပ်ငန်းမှာ အမြင့်၌အလုပ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် စင်ကာပူအစိုးရသည် ၎င်းတို့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လူအသေအပျောက်နှုန်းကို လူတစ်သိန်းလျှင် ၁.၈ ထိ လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် အမြင့်၌အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် သင်တန်းအမျိုးမျိုးပေး၊ ဥပဒေအမျိုးထုတ်လျှက်ရှိရာ ယခုနောက်ဆုံးထုတ်လိုက်သော ဥပဒေမှာ “Working At Height Regulation” ဖြစ်ပြီး များမကြာမီ (၂၀၁၃ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်) အသက်ဝင်လာတေ့ာမည့် ဖြစ်၏။
ထိုဥပဒေကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် လုပ်သမားများတက်သည့်သင်တန်းကိုလည်း အဆင့်မြှင့်လိုက်၏။ ဤသည်မှာ အခြားမဟုတ်။
ယခင်က တက်နေကျ CSOC (Construction Safety Orientation Course) အား တစ်ရက်အစား နှစ်ရက်သို့ တိုးမြှင့်လိုက်ကာ စာမေးပွဲမှာလည်း မဖြစ်ညစ်ကျယ် MCQ ကလေးမျှသာမက လက်တွေ့ပါဖြေရတော့မည် ဖြစ်သတည်း။
ဤဥပဒေမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အသက်ဝင်မည်ဖြစ်၏။
သင်ရိုးတွင် ယခင်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအန္တရာယ်ကင်းရေးသာမက အမြင့်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းအကြောင်း ကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားမည်။
စင်ကာပူသို့ရောက်လာသည့် အလုပ်သမားအသစ်များသည် စင်ကာပူမြေသို့ ခြေချမိသည်မှ ၁၄ ရက်အတွင်း ထိုသင်တန်းကို တက်ရမည်။ သင်တန်းစာမေးပွဲ မအောင်မချင်း ၀ပ်ပါမစ်ကဒ်ပြား ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုစာမေးပွဲကို ၃ လအတွင်း သုံးကြိမ်ဖြေသည့်တိုင် မအောင်ပါက ဘိုင့်ဘိုင်။ စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ရန် မသင့်တော်သေး။ ပြန်ပေဦးတော့။
ထိုသင်တန်းအောင်သူများအား CSOC လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်။ လက်မှတ်သက်တမ်းမှာ (အလုပ်စလုပ်သည့် ၆ နှစ် သက်တမ်းအတွင်း) ၂ နှစ် ဖြစ်ကာ (လုပ်သက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက်) ၄ နှစ်ဖြစ်၏။
သင်တန်းကြေးမှာလည်း တစ်ရက်သင်တန်းတုံးက ၃၇ ကျပ်ခွဲမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း ယခု နှစ်ရက်သင်တန်းအတွက် တစ်ဦးလျှင် ၁၂၀ ဖြစ်သတည်း။ သင်တန်းမတက်ဘဲ စာမေးပွဲသာဖြေမည်ဆိုပါက တစ်ဦးလျှင် ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။
အချို့ဝပ်ပါမစ်သမားများမှာ BCSS (Building Construction Supervisors Safety Course) သင်တန်းတက်ပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အနှီသကောင့်သားများလည်း Working At Height Safety Course for Supervisor ထပ်တက် ရမည် ဖြစ်ပါ၏။ ထိုသင်တန်းမအောင်ပါက ၎င်းတို့ကိုင်ဆောင်ထားသော ၀ပ်ပါမစ်ထပ်မံသက်တမ်းတိုးလို့ ရတော့မည် မဟုတ်ပါ။
သင်တန်းကို BCA (Building Construction Authority) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ပြည်တွင်းပြည်ပ သင်တန်း ကျောင်းများတွင် သင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။ ပြည်ပတွင်ပို့ချသောသင်တန်းများမှာလည်း စင်ကာပူ၌ပို့ချသောသင်တန်းများနှင့် သင်ရိုးအတူတူပင်ဖြစ်ပါ၏။
လက်ရှိ CSOC လက်မှတ်နှင့်အလုပ်လုပ်နေသူများ ထိုလက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်သေးသ၍ ထိုလက်မှတ်နှင့်ပင် ဆက်လက်လုပ်နိုင်ပါသေး၏။ ထိုလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်သွားသည့်အခါ ယခု ၂ ရက်သင်တန်းကို သင်တန်းမတက်ဘဲ စာမေးပွဲဖြေခွင့် ရှိပါသည်။ သို့သော် စာမေးပွဲမအောင်လျှင်တော့ ၂ ရက်သင်တန်း တက်ရပါမည်။ သင်တန်းတက်လို့မှ စာမေးပွဲ မအောင်သေးလျှင် ရှိပြီးသား ၀ပ်ပါမစ်ကိုသိမ်းကာ ပြည်တော်ပြန်လွှတ်ပါလိမ့်မည်။ (သေဟဲ့နန္ဒိယ)
ဤလိုအပ်ချက်ကို ဂရုမစိုက်သော ကုမ္ပဏီများအား WSH Act ပါ ပြစ်ဒဏ်များအတိုင်း ဒဏ်ရိုက်ပါလိမ့်မည်။ ထိုမျှသာ မကသေး။ ဘော့စ်တစ်ဦးသည် ထိုစာမေးပွဲမအောင်သေးသော အလုပ်သမားအား အလုပ်ခွင်သို့စေလွှတ်ကာ အလုပ်လုပ်ခိုင်း သည်ဖြစ်အံ့။ ၎င်းသည် WSH Act ပါ ပြစ်ဒဏ်အတိုင်း ဒဏ်ရိုက်ခံရပါလိမ့်မည်။
ခွင့်ရက်ရှည်ပြန်သွားသည့် ၀ပ်ပါမစ်သမားများလည်း စင်ကာပူသို့ ပြန်လာသည့်အခါ အထက်ဖော်ပြပါ စာမေးပွဲ ဖြေရ ပါလိမ့်မည်။ စာမေးပွဲမအောင်လျှင် ၂ ရက်သင်တန်းတက်ရပါမည်။
ထို ၂ ရက်သင်တန်းစာမေးပွဲကို အောင်မြင်သည့် ၀ပ်ပါမစ်သမားတစ်ဦးသည် ထိုလက်မှတ်သက်တမ်းရှိနေသေးလျှင် အခြားကုမ္ပဏီသို့ကူးပြောင်းသွားသည့်အခါ သင်တန်းထပ်တက်စရာမလိုတော့ပဲ ထိုလက်မှတ်နှင့်ပင် အလုပ်လုပ်နိုင်၏။
သို့သော်လည်းပေ့ါလေ။ စိတ်မပူပါနှင့်ခင်ဗျား။ ဖြေသာစရာတစ်ချက် ရှိပါသည်။ အခြားမဟုတ်။ ထိုသင်တန်းကို ဘာသာ ၈ မျိုးဖြင့် ပို့ချပေးပါမည်။ ၎င်းတို့မှာ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ မလေး၊ တမီ၊ ဘင်္ဂါလီ၊ ထိုင်း၊ ဟင်ဒီ နှင့် မြန်မာ တို့ဖြစ်ပါ၏။ (ဖူး၊ တော်ပါသေးရဲ့။)
ဧပြီလဆန်းတွင် သင်တန်းများ စပေးပါလိမ့်မည်။ လူမကြပ်ခင် အမြန်ဆုံးသွားတက်ထားကြပါခင်ဗျား။
စင်ကာပူရောက်လာ၊ တို့မြန်မာ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။
အစိုးရ ရန်ဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
၂၂ - ၃ - ၂၀၁၃။ ည ၁၀း ၂၃ နာရီ
ခုလို ကောင်းမွန်အကျိုးရှိစေတဲ့ ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ပြန်လည်မျှဝေခွင့်ပြုပါ။ ပြုမယ်ထင်လို့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
မျှဝေလိုက်ပါခင်ဗျား။ အခြား စင်ကာပူရောက်နေသူများ၊ စင်ကာပူလာရန် ကြံရွယ်နေသူများ သိသင့်ပါတယ်။
Hi Ko A N. Read this one. What could it be?
Hi Ko AN, Please see this one. What could it be? Or you had another name?
အင်း၊ လိုချင်လည်း ရိုးရိုးသားသားယူပေါ့ဗျာ။ သူများရေးထားတာကြီး ကိုယ့်နာမည်တပ်တာတော့ သူမို့လို့မရှက်တယ်။ ဟိုတလောကလည်း ခရစ္စတိုဖာပေါက်ကျိုင်းကို တစ်ယောက်က သူ့နာမည်တပ်ပြီး သူ့ဘလော့ပေါ်တင်ထားသေးတယ်။